Okuxosha izinja: okwemvelo nokwenziwe | Izinja Umhlaba
Izinto zokuxosha izinja: ezemvelo nezokufakelwa
Nathi Cerezo | | Ukuziqeqesha
Izinja zokuxosha izinja ziwusizo olukhulu uma sifuna ukugcina izinja zingaphandle kwegceke lethu noma engadini. Kunezinhlobo eziningi, kungaba ezemvelo, ezifuthwayo noma ngohlobo lwamadivayisi akhipha i-ultrasound, yize engasebenzi njalo noma ephephile ezilwaneni.
Kulesi sihloko sizobona izinambuzane ezimbalwa eziphindaphindayo zezinja futhi, ngaphezu kwalokho, sizokhuluma ngezinye izihloko ezikhohlisayo, njengokuthi kungani kungalungile ukusebenzisa i-ultrasound njengomuthi oxoshile, futhi sizokunikeza izindlela zokupheka namathiphu ambalwa okuziphindiselela okwenzelwe izinja.
I-MENFORSAN Ama-Antiorines ...
UMENFORSAN oxoshiwe ...
Petsly Spray Anti Pee...
Imbali 40559 - Ixosha ...
1 Into exosha kakhulu izinja
1.1 I-Antipi yezinja namakati
1.2 Oxoshiwe Olfactory
1.3 I-Apple flavour anti-bite
1.4 Ifenisha neKhabethe Elifutha Amathe
1.5 Ukuxoshwa kwemvelo kususelwa kupelepele
1.6 Ucingo anezikhala
2 Izinhlobo zabaphindeli bezinja
3 Ukusetshenziswa kwe-ultrasound ezilwa nezinja
4 Iziphikisi zemvelo
4.4 UNGAYisebenzisi i-ammonia
5 Ungazithenga kuphi izinto eziphindisela inja
Into exosha kakhulu izinja
I-Antipi yezinja namakati
Lo mkhiqizo weMenforsan yakhelwe ngokukhethekile ukuvikela amakati nezinja ekuchameni kuma-facade, emaceleni noma kumasondo emoto yakho. I-repellent inephunga elimnandi kakhulu futhi ibhekiswe kuzo zombili izinja namakati, ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa ngaphakathi nangaphandle. Ukusetshenziswa kwayo kulula kakhulu, ngoba kuzodingeka ukuthi uhlanze kahle indawo okukhulunywa ngayo bese uyifafaza ngomkhiqizo. Kufanele isetshenziselwe izinsuku ezimbalwa ukuze iqale ukusebenza.
By indlela umenzi uncoma ukuthi ungayihlanzi indawo ezolashwa nge-bleach noma i-ammonia ngoba iphunga lingadonsela izilwane ukuthi zizochama lapho ngoba umchamo unephunga elifanayo. Ekugcineni, ungawusebenzisi umkhiqizo ezitshalweni.
Kuyafana nomkhiqizo owedlule, lokhu fafaza ukuvimbela amakati nezinja ekuchameni ezindaweni esingazifuni. Ayinabo ubuthi futhi isebenza ngendlela elula kakhulu, edala iphunga elinamandla lokwenqaba izinja namakati. Indlela yokuyisebenzisa ilula, ngoba kufanele uyihlanze kahle leyo ndawo futhi usebenzise umkhiqizo, okuzodingeka uwavuselele ngezikhathi ezithile ukuze ungalahli amandla awo futhi uqinise umyalezo. Ngaphezu kwalokho, kusebenza nezindawo zokudlula lapho ungafuni ukuthi lezi zilwane zidlule. Kodwa-ke, uma uyisebenzisa, gwema ukukwenza ngaphezulu kwezitshalo.
I-Apple flavour anti-bite
I-Healthy Dog Co Futha ...
Uma inja yakho uthanda ukuhlafuna amateki akho njenge-gum, le anti-bite spray ingasiza. Isetshenziselwa zombili izinja namakati futhi ibaqeqesha ukuthi bangazilumi izindawo efafazwa kuzo. Yenziwe ngezithako zemvelo ngokuphelele, ngakho-ke ayinabuthi, futhi isebenza ngendlela elula kakhulu: ukunambitheka kwayo okungathandeki okubabayo kususa isifiso sokuluma.
Kodwa-ke, kubonakala sengathi, ngokususelwa kumazwana, ayisebenzi kuzo zonke izinja ... abanye babonakala beyithanda!
Ifenisha neKhabethe Elifutha Amathe
PHARMA IMPILO Knabber X ...
Omunye wemikhiqizo ethakazelisa kakhulu ye- gcina inja yakho kude nefenisha, usofa, noma omagazini nezingubo ingabe lokhu kuxosha ngesifutho esenzelwe lezi zindawo ngokukhethekile. Lesi sifutho sifika ngebhodlela elingu-100 ml, kungokwemvelo ngokuphelele futhi singasetshenziswa ngaphakathi nangaphandle, siphinde sibhekiswe ezinjeni nasemakati. Kodwa-ke, inephuzu elibi, ngoba ibiza kakhulu kunezinye izifutho zohlobo olufanayo.
Ukuxoshwa kwemvelo kususelwa kupelepele
I-BSI Hot Exit - Iyenyanyeka ...
Ilungele ukusetshenziswa kwangaphandle, ikakhulukazi ezindaweni ezinotshani, lo ophendukezela izinja (futhi usebenza namakati) ngokuya ngezithako zemvelo ezifana nopelepele izoshiya iphunga elingemnandi neze kubo. Kunamalitha amabili womkhiqizo okuzodingeka uwasebenzise ukuze usebenze, uma kungenjalo ngeke usebenze.
Njengakweminye imikhiqizo yalesi sitayela, iphuzu elibi ukuthi, ngaphandle kokwazi okuthandwa yizinja, ungahlangabezana nomuntu othanda iphunga futhi ngeke axazulule inkinga.
Amagabeli 100cm X20M...
Ukwenza okubi okukhulu, amakhambi amakhulu: kulabo abafuna indlela yokugcina amakati nezinja kude nengadi yabo, esinye sezixazululo eziphumelela kakhulu ukufaka uthango ezungeze indawo ofuna ukuyivikela. Yize lezo ezincane kakhulu noma zokuhlobisa zingenakukwenza okuningi maqondana nokugwema ukudlula kwezilwane, i-wire mesh kungenye into. Le modeli yenziwe ngocingo oluhlanganiswe ngopulasitiki oluhlaza futhi iqukethe amamitha angama-20 wemitha ukuphakama ongawabeka ngendlela othanda ngayo kuvulandi noma engadini yakho. Ngaphezu kwalokho, izimbobo ezisemeshini zincane ngokwanele ukuthi akukho lutho olungangena noma luphume.
Izinhlobo zabaphindeli bezinja
Ukuthembeka nobuningi be abaphindeli abahlukahlukene abakhona bezinja akugcini ngokuya ngomkhiqizo uqobo, kodwa futhi nenja esifuna ukuyixosha, njengobudala noma ngisho nokuzala, ngakho-ke impumelelo yayo kwesinye isikhathi incike ekuzameni nasephutheni. Ngakho-ke, phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zokuxosha esizitholayo:
Yizinto ezivame kakhulu ukuzithola ezitolo, kungaba ngesifutho, amabhola noma ijeli. Zisetshenziselwa ukubeka endaweni lapho sifuna ukusabisa khona inja. Zingenziwa ngezithako zemvelo noma amakhemikhali abangela iphunga elibi enjeni. Zisetshenziselwa ukugwema ukulunywa ngaphakathi endlini futhi, uma zibekwa ngaphandle, kufanele zivuselelwe njalo ukuze zingalahli amandla.
Ama-Ultrasounds Ziqukethe umshini obekwe ngaphandle futhi okuthiwa ukhipha imvamisa exosha izinja. Kodwa-ke, azinconyelwa uma unezinja ekhaya, ngoba nazo zizobacasula.
Ebubini obukhulu amakhambi amakhulu: esinye sezidakamizwa zasendulo ezinamandla kakhulu ezicijile noma ezicijile, ezungeze indawo okufanele ivikelwe (njengeparao). Okuhle ukuthi zigcina izinja zisebenza kahle impela, yize zingenamsebenzi wokulwa namakati noma amajuba, angakhuphuka noma andize.
Ekugcineni, enye indlela yokwethusa izinja ukwakha into enezakhi zemvelo uqobo lwethu ukuzigcina zikude nengadi yethu. Imvamisa kuqala ngezinto ezingathandeki ezinjeni. Njengoba iphunga labo selithuthuke kakhulu kunelethu, kuyindlela enhle yokubethusa, yize kuzodinga ukuthi silivuselele njengoba iphunga liyanyamalala.
Ukusetshenziswa kwe-ultrasound ezilwa nezinja
Enye yezindlela ezivame ukwesabisa izinja ukuthi ngokusebenzisa amadivayisi akhipha i-ultrasound. Lawa magajethi aze eze ngefomethi yephakethe (ukuqeqesha izinja) noma ngendlela engabekwa engadini, futhi akhipha imvamisa engazwa yizinja kuphela, okuyinto engathandeki kubo futhi, ngokwesisekelo, ebesabisayo .
Nokho, ukusetshenziswa kwayo akunconywa kakhulu noma kunokwethenjelwa kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, kunemikhiqizo engasebenzi ngqo, noma esebenza kuphela nezinja ezithile (ukuzwela kwazo kwe-acoustic kuncike ezintweni ezifana nobudala, uhlobo ...). Ngakolunye uhlangothi, banonya futhi bangalimaza izindlebe zabo, ngakho-ke akuyona inketho enconyelwe kakhulu, ikakhulukazi uma unezinja.
Uma ungenantshiseko ngezixazululo ezitholakalayo ezentengiselwano, singazenzela ezethu iziphikisi izinja ngokwemvelo futhi ngendlela eshibhile kakhulu futhi elula.
Uviniga uyinto esingayisebenzisa ngempumelelo ukugcina izinja zikhona, ngoba iphunga lazo libukeka lingabekezeleleki kakhulu. Ukulungiselela ikhambi kulula kakhuluNjengoba udinga kuphela ibhodlela le-spray elingenalutho uphinde uhlanganise amanzi angama-50% noviniga ongu-50% (sebenzisa uviniga ukuhlanza kangcono kunokugqoka). Yisebenzise ngaphezulu kwendawo lapho ufuna ukwethusa izinja khona. Gwema ukusebenzisa ingxube ngaphezulu kwezitshalo noma utshani uma ungafuni ukuyibulala.
Izithelo zeCitrus ngenye iphunga elizondwa yizinja, yingakho ziyindlela enhle yokusebenzisa njengeziphindiseli. Indlela ejwayelekile yokukwenza nge-orange noma amakhasi kalamula ahlakazekile azungeze indawo. lapho ufuna ukuwagcina khona ekuvakasheni kwe-canine, yize kuyinkemba esika nhlangothi zombili: yize iphunga lezithelo zomndeni wamawolintshi lixosha izinja, lingaheha amagundane namagundane.
Okunye okuhle ukuxosha inja yemvelo ukusebenzisa upelepele, iphunga lawo abangalithandi nhlobo. Ungaxuba i-cayenne kanye ne-powder emnyama bese usakaza ingxube endaweni ofuna ukuyivikela wezinja. Njengakuwo wonke amanye amacala, kuzodingeka ukuthi uwenze musha ngokuhamba kwesikhathi, ngoba imvula izowenza ungasebenzi kahle.
Ngendlela efanayo neviniga, i-ammonia iyaxosha izinja, kepha futhi kungenzeka ukuthi ibangele ukucasuka komphimbo nomonakalo, ngakho-ke akunconywa ukuyisebenzisa. Njengoba sishilo, uviniga yisisombululo esisebenza ngokulinganayo.
Ungazithenga kuphi izinto eziphindisela inja
Kukhona izindawo eziningi lapho singathenga khona izinja eziphindayo esingayisebenzisa ukugcina i-patio yethu noma ithala lethu liphephile kubahlaseli be-canine. Ngokwesibonelo:
En Amazon Uzothola izinhlobo ezahlukahlukene zokuphindisela zazo zonke izinhlobo (ku-spray, kumabhola, kwemvelo, kokufakelwayo ...) ezingaba usizo. Ngaphezu kwalokho, ngomsebenzi wayo oyiNdunankulu unayo ekhaya ngomzuzwana futhi, ngenxa yamazwana amakhulu, ungakhetha eyodwa evumelana kangcono nezidingo zakho.
En izitolo ezikhethekile njengeKiwoko noma iTiendaAnimal nazo zinezinto ezahlukahlukene zokuphindisela, futhi zonke zisezingeni. Njengephuzu lokuhlanganisa, iqiniso lokuthi lezi zitolo zinethuba lokuthengwa online noma ngokomzimba lingasiza kakhulu uma ufuna umkhiqizo noma iseluleko esithile.
Ekugcineni, kufayela le- ingxenye enkulu yengadi yamaketanga njengezikhungo zeCarrefour noma ze-DIY ezifana noLeroy Merlin uzothola iziphikisi ezimbalwa, yize lezi zivame ukuba mpofu ngokuhlukahluka, ngakho-ke kumane kuyindlela ongayibheka engakukhipha enkingeni.
Izinja zokuxosha izinja ziwusizo ekugcineni izinja ngaphandle kwegceke noma engadini. Sitshele, ngabe usebenzise noma yikuphi kwalaba abaphikisayo? Ngabe ikusebenzele? Uyazi iresiphi yemvelo ethe xaxa esingayifakanga?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Izinto zokuxosha izinja: ezemvelo nezokufakelwa
Izinyathelo ezi-4 ezibalulekile lapho usebenzisa inja
Umvikeli wesihlalo semoto yenja